Afar reer Minnesota ah ayaa loo aqoonsaday inay yihiin Heros Unsung oo leh abaalmarin dhan $ 10,000
McKnight Foundation iyo Golaha Minnesota ee Macaamilka (MCN) waxa ay doorteen Shanene Herbert oo reer Minneapolis ah, Jamil Jackson oo reer Minneapolis ah, Shirley Nordrum oo ka tirsan Cass Lake, iyo Patti Reibold oo ka tirsan Red Wing sanadkaan qaata abaalmarinnada abaalmarinta loo yaqaan 'Royal McKnight Binger Unsung Hero Award'.
Abaalmarintani waxay aqoonsan tahay afar reer Minnesota ah oo saameyn weyn ku yeeshay gobolka, laakiin aan weli la aqoonsan ama '' aan la aqoon '' sida ay uga go'antahay inay ka dhigaan Minnesota meel wanaagsan dhammaan.
Guul-wadeyaasha 2019 ayaa mid walbaa heli doonaa abaalmarin lacageed oo dhan $ 10,000 oo ka timaadda McKnight Foundation iyo MCN, waxaana sidoo kale lagu aqoonsan doonaa Shirka Sannadlaha ah ee MCN ee Khamiista, Oktoobar 24 ee Rochester ee Mayo Civic Center.
Tan iyo 1985, Machadka McKnight Foundation wuxuu aqoonsaday Minnesotansan oo hagaajiyay tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka ee la yidhaa Virginia McKnight Binger Awards Awards ee Adeegga Aadanaha. Sannadka 2015, MCN waxay la shaqaynaysay McKnight si ay isugu duwo oo ay u soo bandhigto Abaalmarinta Abaalmarinta Unsung Hero ee ugu horreysa, ee lagu abaalmariyo shaqsiyaadka qabanayay shaqada nolosha isbeddelka ee beelaha ku yaal Minnesota oo leh tiro yar ama aqoonsi.
"Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan iskaashi la sameynayno McKnight Foundation si aan u dabaaldego oo aan u garanno shaqada aan fiicnayn ee abaalmarintan," ayuu yiri Jon Pratt, oo ah agaasimaha fulinta ee Golaha Shacabka ee Minnesota. "Waxay cadeeyeen inta lagu guda jiro nidaamka magacaabidda inta ay la ixtiraami waayeen, maaha oo kaliya magacaabayaashooda, laakiin beelaha aya shakhsi ahaan u taabtay. Waa maxay waxyaabo ay u muujiyeen dad badan oo wax badan sameeya, laakiin marar badan aan la ogaan karin shaqada Minnesota iyo wixii ka baxsan! "
Waxyaabaha ku saabsan abaalmarinta loo yaqaan 'Hernande Award' ee abaalmarinta loo yaqaan 'Red Virginia'
Shanene Herbert oo reer Minneapolis ah Ku dhawaad 20 sano, Shanene Herbert wuxuu ahaa xoog bulshada dhexdeeda. Nin reer New Yorker ah oo hada ku nool woqooyiga Minneapolis isla markaana leh laba caruur ah, Shanene ayaa la shaqeysay dhalinyaro dhalinyaro ah oo midab leh iyo waalidkood goobaha waxbarashada ee Twin Cities, ka caawinta dhalinyarada iyo waalidkood in ay u maraan dariiqyada guusha oo si tartiib tartiib ah ugaga cararaan garoonka tuubbada xabsiga. Shanene waxay soo bandhigtay dhowr barnaamijyo iyo dadaalo, oo ay kujirto Heal Sis, oo ah qorshe hoosaadyo isku keenaya haweenka si ay uga baaraandegaan wixii ay soo mareen, hada, khibradaha mustaqbalka iyo murugada ku saabsan mowduucyada noloshooda saameyn ku leh. Shanene sidoo kale waxay aad u jeceshahay Double Dutch, waxayna martigelisaa munaasabado ay u isticmaasho Double Dutch si ay uga hawl gasho haweenka Waqooyiga Minneapolis iyo inay ka hadasho arrimaha ku saabsan noloshooda. Shaqadeeda oo dhan, waxay ahayd buundo u dhaxaysa dadka mudnaanta leh iyo bulshooyinka ay u adeegayaan iyadoo ay weli u tahay u-doodaha adag iyo hal abuurka bulshada.
Jamil Jackson oo reer Minneapolis ah - Jamil Jackson wuxuu naftiisa u hibeeyay hagaajinta nolosha dhallinyarrada danyarta ah ee ku nool woqooyiga Minneapolis. Iyada oo loo marayo kubbadda Koleyga, Jamil wuxuu abuuray barnaamij horumarineed oo hoggaamineed oo ay ku hawl galaan in ka badan 200 oo wiilal toddobaad kasta, iyagoo xoogga saaraya u diyaar-ahaanshaha kulliyadda iyo mustaqbalkooda shaqo. Barnaamijkan, Jamil wuxuu soo saaray maamule sare (Change Equals Opportunity), kaasoo keenaya hogaamiyaasha bulshada inay hagaan oo hagaan dhalinyarada barnaamijkiisa iyadoo diirada la saarayo hogaamiyaasha madow ee wanaagsan iyo ganacsiga. Wixii ka baxsan shaqadan, Jamil wuxuu bilaabay hawlihiisa gaarka ah iyo dayactirka cawska halkaas oo uu ku tababarto kuna shaqeysto dambiyada dhalinyarada iyo ardayda khatarta ugu jirta ku lug lahaanshaha baandooyinka. Jamil wuxuu muujiyaa nin kasta oo dhalinyaro ah barnaamij kasta oo uu jecel yahay iyo naxariis, waana wakiilka dhabta ah ee isbedelka iyo geesiga qoysaska badan ee waqooyiga.
Shirley Nordrum oo ka tirsan Cass Lake - Shirley waxay u heellantahay nolosheeda hagaajinta fayoqabka bulshada ee barkadaha Leech, Red Lake, iyo White Earth iyada oo la xoojinayo tayada deegaanka, sugnaanta cunnada, iyo nafaqada. Fahamka baahiyaha beel kastaa leedahay, Shirley waxay diyaarisay habab hal-abuurnimo ah oo lagu gaadhayo laguna hawlgalinayo dadka mowduucyada caddaaladda bulshada iyo deegaanka. Waxay ka go'an tahay u adeegida dhalinta agagaaraha iyadoo bixineysa kulanno xirfad-dhis caafimaad oo caafimaad qaba oo diirada saaraya qaansoleyda, abeesooyinka barafka, lacrosse, iyo farshaxanka dhaqanka. Dhawaan, Shirley wuxuu xoogga saaray xoojinta adeegsiga iyo dib u soo celinta nidaamyada cuntada ee Ojibwe si loo wanaajiyo caafimaadka cuntada iyo dhaqaalaha xubnaha Band. Waxay iskaashi la sameysay xubnaha bulshada si ay u horumariyaan Nanod-gikenimindwaa Nindinawemaaganidog (sidii loo baran lahaa dhammaan abuurka) sidii aalad looga caawiyo dhalinyarada iyo qoysaska dib ula soo noqoshada aqoonta cilmiga dabiiciga ah hadana hada duuliyayaashu waa Gaduud Cas, barnaamij dhalinyaro ah oo loogu tala galay da’da 5-14 beeraha, dhaqanka, cunista caafimaadka, iyo dhaqdhaqaaqa jirka. Dhamaan shaqadeeda, Shirley waxay sii wadaa inay dhisto bulshada iyo shabakadaha.
Patti Reibold oo ka tirsan Red Wing - Patti Reibold waxay si liidata ugusoo bandhigtay qof kasta oo ka mid ah bulshadeeda Red Wing. Qof kasta oo u baahan wax kasta, laga bilaabo dharka ilaa cuntada ilaa alaabta guriga, waxay u kacdaa caawimaad Patti. Sannadkii 1998, Patti wuxuu aasaasay "Iskuxirka Iskuxirka," isaga oo ku riyoonaya abuurista meel alaabada tabaruc lagu siin karo dadka kale ee aan wax lacag ah ugu fadhiyin. Halkaas, waxay ka bilawday inay si dhaw ula shaqeyso Isbahaysiga HOPE, iyadoo ka caawineysa badbaadayaasha rabshadaha qoyska inay helaan bilow cusub. Marka ka badbaaday rabshadaha qoyska ayaa diyaar u ah inuu ka guuro hoyga maxalliga ah, Patti waxay dhistaa dambiilo bixitaan oo ay ka buuxaan waxyaabaha aasaasiga ah ee guriga waxayna u diyaariyaan cunno kulul si ay ugu soo dhoweeyaan maalinta koowaad ee gurigooda cusub. Ciidda masiixiga iyo ciidaha, Patti waxay diyaarsataa oo u fidisaa casho kuwa haddii kale maqnaan laheyd. Wax kasta oo qof u baahan karo, laga bilaabo fuulitaanka ilaa u qaadashada eeyga adeegga macmiilka ilaa dhakhtarka xoolaha, Patti waxay diyaar u tahay inay caawiso. Shaqadeeda oo dhan, Patti waxay ka gaabisay hamigeedii ahaa inay caawiso dadka kale waxayna wali u tahay udub dhexaadka bulshada dhexdeeda.
Shanene Herbert waxay u isticmaashaa Double Dutch si ay uga qeyb qaataan haweenka
Jamil Jackson wuxuu dhalinyarada la shaqeeyaa barnaamijkiisa hormarinta hogaaminta
Shirley Nordrum wuxuu ka shaqeeyaa hagaajinta fayoqabka bulshada
Patti Rebold waxay qabanqaabisaa tabarucyo "Iskuxirka Xiriirka"
Ku Saabsan Guddiga Minnesota ee Ka Qayb-galka
Golaha Minnesota ee 'Non -profits' wuxuu ka shaqeeyaa inuu wargeliyo, dhiirrigeliyo, isku xirayo, iyo xoojiyo shaqsiyaadka aan faa'iido-doonka ahayn iyo waaxda aan macaash doonka ahayn. Waxaa la aasaasay 1987 si loo habeeyo baahiyaha macluumaad ee sii kordhaya ee faa'iido-doonka iyo in la isugu yimaado is-daba-marinta si wax looga qabto arrimaha soo food saaraya waaxda, MCN waa urur goboleedka ugu weyn ee faa'iido-doonka ee Mareykanka oo leh in ka badan 2,100 ururo xubnood.